Okungafuneki sekuyinto efiselekayo - ingxenye 2 | Apg29
Incwadi Yokuqala Yebandla LamaPentekoste ka-150.
Lapho ubona uChrister Åberg esebenza namuhla, ngokwesibonelo nge-blog site yakhe ethi www.apg29.nu, ubuhlakani bakhe nokucija kwakhe kwezenkolo - kucishe kungaqondakali ukuqonda ukuthi yena, ngaphambi kokuhlangenwe nakho kwakhe kwensindiso, wayebhekene nokwenqatshwa okujulile.
Kusuka ku-Baptist Pentecostal letter 150
Lapha encwadini yesibili yemininingwane enezingcaphuno ezivela encwadini kaChrister Åberg ethi "Okungafuneki", isihloko sithi ukubhapathizwa kukaChristian emanzini nokubhapathizwa ngoMoya oNgcwele. Isahluko sokuqala sencwadi sibizwa ngokuthi “Ubumnyama” futhi siqala kanjena (ikhasi 11): “Empilweni yami bengingakaze ngizizwe ngithandwa, ngibalulekile noma ngidingeka. Ngakho-ke, angibonanga ndlela yokuphuma ngaphandle kokuqeda impilo yami phakathi kwempilo yabantu engayifuni, ngineminyaka engu-17.5 ubudala. "
Ngemuva kwemicabango emnyama, beka phakathi kwezinye izinto ukufakwa kokunakekelwa kwabantu abakhulisa izingane kanye neziqhwaga eziningana. Ekhasini 85 lale ncwadi, uChrister uyabhala: “Empeleni, ngangiyingane ejabule futhi eyayicishe ihleke. Umama ongondlayo wake wangitshela lapho sengimdala, ngaphambi kokuba aphelelwe yithemba, ukuthi ngangihole futhi ngihleka wonke umuntu ngenkathi ngiqala ukufika kubo ezweni. Kepha ngenxa yakho konke ukuklinya nokudangala engizokuhlangabezana nakho ekhaya, esikoleni nangesikhathi sami sokuphumula, angigcinanga ngokuba yingane ejabulayo. Ukungazethembi kwami ​​kwakucace bha kimi. ”
Lapho ubona uChrister Åberg esebenza namuhla, ngokwesibonelo nge-blog site yakhe ethi www.apg29.nu, ubuhlakani bakhe nokucija kwakhe kwezenkolo - kucishe kungaqondakali ukuqonda ukuthi yena, ngaphambi kokuhlangenwe nakho kwakhe kwensindiso, wayebhekene nokwenqatshwa okujulile. Ukuziqeqesha nokuqeqesha abanye ngekarati, kumsizile ngandlela thile kukho konke ukuthotshiswa.
UKUBHAPATHIZWA NGAMANZI NOMOYA
Kepha manje ekuqhubekeni kwendlela yensindiso, okungukuthi, ngokubhapathizwa emanzini nokubhapathizwa ngoMoya oNgcwele. Izingcaphuno ezivela emakhasini 142-145:
“Ngangifunde eBhayibhelini ngokubhapathizwa. Ngabona ukuthi ngidinga ukubhapathizelwa kuKristu egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Bengingazi okuningi ngakho, kepha bekukhona okuthile ngaphakathi kimi okwathi: "Ngidinga ukubhapathizwa!" kucatshangelwe. Kodwa angizange ngiqonde ukuthi manje ngangikholelwa kuJesu ngakho-ke ngidinga ukubhapathizwa. Nganginovalo olukhulu ngalolo suku lwangeSonto esontweni Ljungby Pentecostal lapho ngangizobhapathizwa. KwakunguJanuwari, izinyanga ezimbalwa ngemuva kokuba ngisindisiwe. Indawo yokupaka ngaphandle ibigcwele izimoto eziningi kanti ngaphakathi esontweni bekugcwele abantu. Ihholo lonke lesonto laligcwele phama ngisho nasepulpiti. Kwakungimi nomfana omncane oneminyaka engu-10 ababezobhapathizwa.
Sasigqoke izingubo ezimhlophe ezazifanekisela ukuthi manje sesimsulwa kuKristu Jesu. Awudingi ukugqoka izingubo ezimhlophe. Kuhamba kahle ngezingubo ezijwayelekile, kepha yilokho ababejwayele ukukwenza kulelo sonto. Sabhapathizwa echibini elincane elalifihlwe ngaphansi kwesiteji esasingaphambili kwehholo lesonto. Babesusile izembozo zaphansi bagcwalisa ichibi ngamanzi abizwa ngobhabhadiso. Kukhombisa ukuthi umuntu uyangcwaba impilo yakudala noKristu bese evuka kuKristu ngokusha.
Umfana uqale wabhabhadiswa nguyise, umfundisi osemusha. Ngibe sengingena emanzini ngesitebhisi esincane. UJohnny wema emanzini wangamukela. Ngaphambi nje kokuba ngibhapathizwe, ngabona ukuthi wonke umuntu wayengigqolozele. Ngangizibuza ukuthi kungani bebukele kangaka, kodwa ngabona ukuthi okwakwenzeka manje kwakuyisimangaliso esikhulu futhi esimangazayo, njengoba kuhlale kunjalo lapho umuntu esenqume ukulandela uJesu futhi abhaphathizwe egameni lakhe. Umfundisi osemusha wathi kimi ngokuzwakalayo nangokucacile ukuze wonke umuntu ezwe: tNgokuyalelwa yiNkosi yami futhi lapho uvuma izono zakho, ngiyakubhaphathiza kuKristu egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele! ´ Wabe esengiphonsa emanzini ukuze ngikwazi wavulwa wabuye wangigoqa futhi ukuze wonke amanzi agelezele emifudlaneni ehlakazekile. Futhi manje ngabhapathizwa ngendlela yaseBhayibhelini iTestamente Elisha efundisa futhi isho ngayo…
Emhlanganweni (kamuva, inothi lami), ngezwa owesifazane osekhulile ethandaza ngolunye ulimi. Wayehleli ngemuva kwegumbi ngakho-ke ngangingaboni ukuthi ubani… Ngakho-ke angazi namhlanje ukuthi ngubani okhuleke ngolunye ulimi. Ngangingaqondi ukuthi kungani ayengathandazi ngesiSwidi. Kuzwakala njengeFinnish ngakho ngacabanga ukuthi mhlawumbe ungowaseFinland. Kamuva ngangiqonda ukuthi uziluma ulimi. IBhayibheli lifundisa ukuthi uma umuntu esephendukile futhi wabhapathizwa, kufanele athole uMoya oNgcwele njengesipho. Yilapho-ke lapho ukwazi ukukhuluma ngezilimi. Ukukhuluma ulimi ulimi lokuthandaza kuNkulunkulu. Ukwamukela uMoya oNgcwele njengesipho kubizwa nangokuthi Ukubhabhadiswa Komoya. Futhi manje bengifuna ukubhapathizwa ngoMoya oNgcwele futhi ngikhulume ngezilimi. Kodwa ngangingazi ukuthi kuzohamba kanjani… Ngabe sengithenga incwadi ebizwa ngokuthi “Ukuphila Okusha Komoya” engayithola encwadini yesonto likaMoya emnyango.
Wabhala encwadini ukuthi kunikezwa uMoya oNgcwele. UJesu wathumela uMoya oNgcwele ngosuku lwePhentekoste, cishe eminyakeni eyizi-2 000 eyedlule. Futhi manje kwakungukumamukela nje ngokholo ngoba wayeyisipho. Uhlala uthola isipho, ngaphandle kwalokho ngeke usithole isipho. Wabhala ukuthi okokuqala uthola uMoya oNgcwele bese uvula umlomo wakho bese uqala ukukhuluma ngezilimi. Nginqume ukuthi ngizame. Ngisekhaya efulethini lami, ngangiguqa eceleni kombhede wami, njengoba bengihlala ngenza lapho ngithandaza ngaleso sikhathi. Ngakho-ke ngathola uMoya oNgcwele ngokukholwa, ngabonga uNkulunkulu, ngavula umlomo wami ngaqala ukukhuluma ngezilimi. Kusebenzile! Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, ngabhapathizwa ngoMoya oNgcwele futhi ngakwazi ukukhuluma ngezilimi. Manje, ngezinyathelo zokuzama, ngase ngiqale uhambo lokholo ekulandeleni kwami ​​uJesu Kristu. ”
V 08, lördag 27 februari 2021 kl 14:11